Blazer kana American? - Misiyano uye mapfekero ega ega hembe | Stylish Men
Blazer kana American?
Alicia tomero | 11/06/2022 11:55 | Kuchengetwa kwega, fashoni, Trends
Sezvo iye blazer, blazer sejacket, mune zvakafanana zvinoreva zvakafanana, asi chokwadi chimwe nechimwe chine mufungo wakati. Matemu akapihwa kune mumwe nemumwe ane vavariro yavo, kubva munhoroondo yese uye nekuda kwekushanduka kwavo, dhizaini ine zita ravo pachayo yakagadzirwa.
Iwe unofanirwa kusarudza pakati peblazer kana jekete? Ndeupi musiyano pakati pezvose? Kuita maonero pamusoro tinogona kuwana zvidiki izvo nhasi zvatinogona kuziva muzvitoro zvisingaverengeki. Musiyano uri pakati pemazuva ano uye zvakajairika, uye pakati zvinoyevedza uye zviri pamutemo.
Isu tinoziva izwi rekuti bhachi sezita regeneric kutsanangura blazer kana bhachi. Mabviro ayo akatorwa patsva kubva ku a zvechinyakare England Tailoring, uko yakazotumirwa kuAmerica uye zita rekuti Americana rakabatanidzwa pairi.
Zvinofanira kuonekwa kuti jekete ndiro izwi rinopiwa mazita maviri aya. Nhasi zviri sezvatinozviziva, asi akaberekerwa muEngland uko yakazotengeswa kunze kwenyika dhizaini yake kuAmerica. Ikoko kwakatanga kugadzirwa sechipfeko chakasiyana uye chepamutemo uye apo zita reAmericana rakapiwa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mamwe madhizaini ejaketi akagadzirwa mune imwe chidimbu.
1 Blazer kana American?
zvakasiyana Izvo zvinoenderana nemunhu uye nguva. umo ichashandiswa. Sezvatakamboratidza, iyo blazer yakanaka kwazvo, asi ine iyo yemitambo kubata. Iyo bhachi yakanyanya kunaka uye zvinoenderana nechiitiko kana nguva iyo yainozoratidzwa.
Blazer uye jekete Aya ndiwo mazano maviri anga aripo kwemakore, kunyange isu tagara takapfeka jekete kana blazer. Iyo tsanangudzo uye misiyano inogona kuwanikwa mumidziyo yayo uye kucheka kwejira uye isu tinoitsanangura pazasi.
Iyo bhachi chipfeko chepamutemo chakanyanya. Yakazvarwa muEngland pakupera kwezana ramakore rechi XNUMX uye yakagadzirwa nekucheka mipendero yejasi rejasi. Nenzira iyi jasi rinogadzirwa zviri nyore kutakura, zvakanyanya kushanda uye pasina kurasikirwa nekunaka.
Muzana remakore rechiXNUMX rakagadzirwa rimwe jekete rakagadzirwa Ine zita rekuti "suit jacket" uye nekuda kweanokudzwa Beau Brummell (pefiyumu yeBrummell inotakura mufananidzo wake wakadhindwa) fashoni yake inokura sezvaanove mureza wefashoni panguva iyoyo.
english immigrants zivisawo iyi maitiro ejaketi. Vanoita shanduko, vachisiya mabhatani maviri chete pamatatu uye kuvhura kamwe chete kwainaro kunotsiviwa nemamwe mazaru maviri anoshanda padivi pehembe.
MuSpain Iyi modhi yebhachi inosvika mukati XIX remakore uye yakatobhabhatidzwa sebhachi reAmerica, zvichipiwa mavambo ayo. Chimiro chayo chepamutemo chinomira pachena, chine puranga remabhatani maviri akasviba nehomwe dzeflap. Iri bhachi reAmerica rakagadzirirwa kuti rifanane nemabhuruku uye nekudaro kugadzirisa sutu.
Ndiwo hanzu dzakakodzera dzechiitiko chakakosha uye chakarongeka, semakwikwi kana kupemberera. Rudzi urwu rwenguvo rwakanaka kupfeka nebhatani rekutanga rakasungirirwa. Kunyangwe isu takaipfekedza sechipfeko chepamutemo chekuperekedza bhurugwa uye kuti vanoenda kunoenderana, isu tinogona zvakare kuishandisa isu pachedu uye neimwe nzira zvisina kurongwa, tichiisanganisa nemabhuruku echiChinese kana majini.
Izvo zvine kwayakabva kuuto regungwa kubva pane iyi data tinogona kuiisa mukuti chimwe chinhu chine mutambo. Iyo zvakare inoyevedza, asi nekamwe kakubata bata. Mukutanga kwayo yaisiyaniswa nekutakura mabhatani esimbi uye zvigamba homwe. Vamwe vavo vakatakura rumwe rudzi rwechiratidzo pahomwe yepazamu uye chaive chiratidzo chembatya dzaizopfekwa pamakwikwi eCricket muEngland.
Mambokadzi Victoria weEngland muzana remakore rechiXNUMX aida kugadzira jekete, zvichienderana neAmerica, kupi yakagadzirwa nemicheka yakawanda isingachinji, nehomwe imwechete yakachekwa uye chigamba. Mune iyi maitiro tinogona kuona kuti yakanyanya mitambo uye yakajairika.
Muma20, blazers dzakava fashoni, apa kusanganiswa kwake nebhurugwa jena kwakamira. Nhasi tinogona kuvabatanidza nechero bhurugwa, kazhinji slim style, mune chero ruvara uye kunyange ne jeans. Inogona gadzira chitarisiko chakanyanya.
Kuti tikurukure mabhachi maviri aya, zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kutaurwa. Iwo ari nyore chaizvo mashoko apo muAmerica akanyanya kurongeka, ine bhatani rakasviba placket uye flap homwe. Kazhinji inoenda nebhurugwa. Zvakadaro, iyo blazer inonyanya kuve yakajairwa, ine jira rinonyanya kumira uye rine zvigamba homwe. Ivo vakakwana kupfeka nenzira isina kurongeka uye ivo vakakwana ne jeans.
Unogona kutiverenga mune yedu "mazano ekupfeka matatu marudzi eblazer" and in "maitirwo ekugadzira mufananidzo unoyevedza une classic blazers".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Blazer kana American?
Mhando dzekusvira varume
Kutaridzika kwerudo: maitiro ekuaziva